Usefisa ukuyolwela ukunqoba iGrammy umculi kamaskandi - Ilanga News
Home Izindaba Usefisa ukuyolwela ukunqoba iGrammy umculi kamaskandi
Usefisa ukuyolwela ukunqoba iGrammy umculi kamaskandi
Umculi kamasikandi uKhuzani “Indlamlenze” Mpungose uyale abezinye izinhlobo zomculo ngezindlela zokunqoba.
ISITHOMBE: YINQOLOBANE YELANGA
USEFISA ukuzibona esembangweni wendondo nezinye izingqwele zomculo emhlabeni kwiGrammy Awards umculi kamaskandi, uKhuzani “iNdlamlenze” Mpungose, owenze ezibukwayo ngengqophamlando yamavoti awu-957 950 ngesikhathi kuvotelwa ingoma yokuhlukanisa oKhozini FM.
UKhuzani waseMandaba, eNkandla, unqobe ngengoma yakhe ethi, “Ijele” elandelwa yimbangi yakhe kumaskandi, uMthandeni “iGcokama Elisha” Manqele ngamavoti awu-312 051. uthi isifiso sakhe esikhulu manje wukuthi angenele iGrammy Awards e-United States of America (USA).
“Ukunqoba kwami ngalolu hlobo kungikhombise ngokusobala ukuthi sengisalelwe wukuyoncintisana namanye amaciko phesheya. Isifiso sami esikhulu manje wukuthi ngingenele iGrammy.
“Engingakusho nje wukuthi ngiyabonga kakhulu kubantu baseNingizimu Afrika, kusho lukhulu kakhulu kimina lokhu abangenzele khona. Bekusho ukuthi ngiqedile eNingizimu Afrika, akukho engingakuwinile manje.
“I-Sama Award nginayo, iDstv Awards, iSong of the Year ngaphinda ngagcwalisa iMoses Mabhida Stadium emasontweni adlule kade ngiwina umklomelo ka-R600 000 kwiKZN Awards njengomculi okuthiwa uhamba phambili esifundazweni ngokuthandwa,” kusho uKhuzani.
Uthi bonke abavotile uyababonga namaBlue Nation (abalandeli bakhe).
Utshele ILANGA ukuthi leli gebe alivulile ngokwamavoti selicacisela nengane encane ukuthi akasenaye untanga emculweni, ikakhulukazi kumasikandi.
IGcokama Elisha ebeliqokwe ngengoma yalo ethi, “Amageja”, lilandelwe nguBig Zulu olale endaweni yesithathu ngengoma yakhe eshisa izikhotha ethi, “Imali Eningi”.
Abaculi bezinye izinhlobo zomculo bakhombise ukungathokozi ngokunqoba kukamasikandi.
UMkhonzeni “Professor” Langa wodumo lwengoma ethi, “Jezebel” eyahlukanisa unyaka ngo-2010 ubonakele kwi-video ethuka abasakazi ezinkundleni zokuxhumana ethi kwenzeka kanjani ukuthi ingoma kaBig Zulu ingawudli umhlanganiso ekubeni idlalwa umhlaba wonke.
Nokho ubuye wafaka enye exolisa ngenhlamba abeyibhekise kubasakazi. UBig Zulu uthe uyababongela abanqobile, kodwa kumele kwenzeke ngendlela ehlukile, kungalokhu kuwuhlangothi olulodwa olunqenqeza phambili ngoba lokho kuqeda isasasa, abanye abantu bengazizwa bemukelekile.
UMthokozi “Dj Tira” Khathi ingoma yakhe ethi, “Summertime” eyahlukanisa unyaka ngo-2012 naye ubabongelile abawinile, wathi kodwa kukhona okumele kushintshe endleleni izinto ezenzeka ngayo.
Sekungokwesibili iminyaka ilandelana kunqoba ingoma kamaskandi oKhozini njengoba ngodlule kunguSenzo “Ntencane” Zondi okhale wemuka nomklomelo ngengoma yakhe ethi, “Wawuthembeni”.
Ephawula ngokungenami kwabaculi bezinye izinhlobo zomculo ngokukhonya kwakhe uKhuzani uthe: “Vele akekho umculi ongaphatheka kahle uma ehluliwe, lokho bengikulindele. “Engingababonisa ngakho nje wukuthi mababe munye njengomaskandi, baphembe izinduna babe namagatsha abalandeli babo. yilokho kuphela okuyoshintsha imiphumela yabo, ngale kwalokho umaskandi uyowina kuze kube ngunaphakade,” kusho uKhuzani.
Previous articleUsizi kowoKhozi FM eshonelwa ababili
Next articleLiyaqotha izembe emakhehleni eDowns